Fanamby Ranon-tsira, Mandingana Sakafo sy #DignityStrike: Maneho Firaisankina Amin’ireo Gadra Mitokona Tsy Hisakafo Ny Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Rawan Gharib
Voadika ny 11 Mey 2017 5:12 GMT
Sary: pejy fanentanana Solidarity with Prisoners , Facebook.
Isan-taona isaky ny 17 Aprily, mankalaza ny Andron'ny Gadra Palestiniana ny Palestiniana ao anatin'i Palestina sy ny any am-pielezana mba hihazonana ny fankalazana sy ho fantatr'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fisarihana ny saina manoloana ny fijalian'ireo gadra Palestiniana sy mampiseho ny fandikan-dalàna mihatra amin'izy ireo ao anatin'ny fonja Israeliana .
Tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny Andron'ny Gadra Palestiniana, gadra Palestiniana 1500 (nitombo 1580 ny isa taty aoriana) amin'ireo gadra 6500 no niara-niditra tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina. Nanambara ny fitokonan'izy ireo ao amin'ny fonja Hadarim ireo voafonja avy amin'ny vondrona Palestiniana samihafa.
Vokatry ny tsy firaharahian'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Israely (IPS) mandrakariva ny fitakian'ny gadra, izay tsy inona fa ny zo fototra voalazan'ny fifanarahana iraisampirenena, indrindra ny Fifanarahana tao Geneva no anton'ny fanambarana. Saingy mbola nanapa-kevitra hampitombo ny fepetra famoretana sy ny fanararaotana ny voafonja ny IPS, tsy manome ny zon'ny gadra sy manao tsindry ara-tsaina lehibe amin'izy ireo.
Nampahafantatra ny fitakiany ny mpitarika ny fitokonana tamin'ny Alahady 16 Aprily, iray andro mialoha ny fitokonana, mba ahafantaran'ny IPS fa tsy hifarana ny fitokonana raha tsy voavaly ireo fitakiana manaraka ireto:
Nalaza tao amin'ny sehatra media sosialy rehetra ny #DignityStrike, amin'ny fanasana sy lahatsoratra miantso firaisankina amin'ny gadra amin'ny fomba isan-karazany. Iray amin'izany ny Water and Salt Challenge (Fanamby Rano sy Sira), izay rano fisotron'ireo gadra mitokona mba hisorohana ny taovan'izy ireo tsy ho lò, indrindra fa mitombo ny filàna ara-tsakafo. Anisan'ny fomba hafa ihany koa ny fizarana lahatsary sy lahatsoratra fanohanana sy famoronana kisarisary maneho ny fitokonana sy ny tanjony, ankoatra ny hafa.
Nandritra ny dingana miavaka sy ny andrana vaovao maka tahaka ny zavatra iainan'ny gadra amin'ny fitokonana, natomboky ny vondrona tanora mpikatroka Palestiniana ny hetsika Firaisankina amin'ny Gadra ho fanohanana ny fiorenan'ireo gadra amin'ny tolon'izy ireo.